YEYINTNGE(CANADA): နစက ကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကြီး ထောင် အနှစ် ၄၀ ချခံရ
အော်...ဒီလိုပြောလို့ရကြေးလား ဒေါ်လတ်လတ်သိန်း ရယ်။ ဒီလိုပြောရအောင်ခင်ဗျားယောက်ျားက အခြောက်လား? ဘုန်းကြီးလူထွက်လား? ဒီလိုကြောက်တတ်ရင် ဘာဖြစ်လို့စစ်ထဲဝင်သလဲ? အာဏာပါဝါ လိုချင်လို့လား? ရှင်းရှင်းပြောပါ။